Ọpụpụ 36 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Onyinye ndị e wetara karịrị akarị (1-7)
A rụwara ụlọikwuu ahụ (8-38)
36 “Bezalel na Oholiab ga-arụkọ ọrụ, ha na nwoke ọ bụla nwere nkà,* bụ́ onye Jehova mere ka o nwee amamihe na nghọta ma mara otú e si arụ ọrụ niile gbasara ozi dị nsọ, otú Jehova nyere n’iwu.”+ 2 Mosis wee kpọọ Bezalel na Oholiab na nwoke ọ bụla nwere nkà, bụ́ onye Jehova mere ka o nwee amamihe,+ onye ọ bụla o metụrụ n’obi iwepụta onwe ya ịrụ ọrụ ahụ.+ 3 Ha wee nara Mosis onyinye niile+ ndị Izrel wetara a ga-eji arụ ọrụ gbasara ozi dị nsọ. Ma, ndị Izrel ka nọ na-ewetara Mosis onyinye si ha n’obi kwa ụtụtụ. 4 Mgbe ha malitere ọrụ ahụ dị nsọ, ndị niile nwere nkà nọ na-abịa n’otu n’otu. 5 Ha nọkwa na-asị Mosis: “Ndị Izrel na-eweta ihe karịrị ihe a chọrọ maka ọrụ a Jehova nyere iwu ka a rụọ.” 6 Mosis nyeziri iwu ka a maa ọkwa n’ebe niile ha mara ụlọikwuu, sị: “Ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị, unu ewetazila onyinye maka ọrụ a dị nsọ.” N’ihi ya, e mere ka ha kwụsị iweta ihe ọ bụla ọzọ. 7 Ihe ndị e wetara zuru maka ọrụ niile a ga-arụ, ha karịdịrị akarị. 8 Ndị niile nwere nkà+ wee jiri ákwà ụlọikwuu iri rụọ ụlọikwuu ahụ.+ Ha ji ezigbo eri linin a kpara akpa, eri na-acha anụnụ anụnụ, ajị anụ na-acha pọpụl, na eri na-acha uhie uhie, kpaa ákwà ụlọikwuu ndị ahụ. Ọ* kpara ndị cherob na ha.+ 9 Nke ọ bụla n’ime ákwà ụlọikwuu ndị ahụ dị kubit* iri abụọ na asatọ n’ogologo na kubit anọ n’obosara. Ákwà ụlọikwuu niile ahụ hà. 10 O wee dụkọta ákwà ụlọikwuu ise ọnụ, dụkọtakwa ákwà ụlọikwuu ise nke ọzọ ọnụ. 11 O jizi eri na-acha anụnụ anụnụ dụnye oghere n’ọnụ ọnụ ákwà ụlọikwuu ise a dụkọtara ọnụ, n’ebe a ga-ejikọta ya na nke ọzọ. O mere otu ihe ahụ n’ọnụ ọnụ ákwà ụlọikwuu nke ọzọ a dụkọtara ọnụ, n’ákwà ya nke ikpeazụ, n’ebe a ga-ejikọta ya na nke ọzọ. 12 Ọ dụnyere oghere iri ise n’otu ákwà ụlọikwuu, dụnyekwa oghere iri ise n’ọnụ ọnụ ákwà ụlọikwuu nke ọzọ n’ebe a ga-ejikọta ya na ákwà ụlọikwuu nke ọzọ, ka oghere ndị ahụ chee ibe ha ihu. 13 N’ikpeazụ, o ji ọlaedo rụọ nko iri ise ma jiri nko ndị ahụ jikọta ákwà ụlọikwuu ndị ahụ, ya abụrụ otu ụlọikwuu. 14 O wee jiri ajị ewu kpaa ákwà ụlọikwuu a ga-eji kpuchie ụlọikwuu ahụ. Ọ kpara ákwà ụlọikwuu iri na otu.+ 15 Nke ọ bụla n’ime ákwà ụlọikwuu ndị ahụ dị kubit iri atọ n’ogologo na kubit anọ n’obosara. Ákwà ụlọikwuu iri na otu ahụ hà. 16 O wee dụkọta ákwà ụlọikwuu ise ọnụ, dụkọtakwa ákwà ụlọikwuu isii nke ọzọ ọnụ. 17 Ọ dụnyeziri oghere iri ise n’ọnụ ọnụ ákwà ụlọikwuu ahụ a dụkọtara ọnụ, n’ákwà ya nke ikpeazụ, n’ebe a ga-ejikọta ya na ákwà ụlọikwuu nke ọzọ. Ọ dụnyekwara oghere iri ise n’ọnụ ọnụ ákwà ụlọikwuu nke ọzọ a ga-ejikọta ya na ya. 18 O ji ọla kọpa rụọ nko iri ise a ga-eji jikọta ákwà ụlọikwuu ndị ahụ ka ha bụrụ otu. 19 O ji akpụkpọ ebule e sijiri ọbara ọbara mee ihe a ga-eji kpuchie ụlọikwuu ahụ, jirikwa akpụkpọ anụ sil mee ihe a ga-ekpukwasị n’elu ya.+ 20 O jizi osisi akeshịa+ rụọ frem ndị kwụcha ọtọ a ga-eji rụọ ụlọikwuu ahụ.+ 21 Frem nke ọ bụla dị kubit iri n’ogologo na otu kubit na ọkara n’obosara. 22 Frem nke ọ bụla nwere ụkwụ abụọ nọkọtara ọnụ n’okpuru ya. Otú ahụ ka o si rụọ frem niile a ga-eji rụọ ụlọikwuu ahụ. 23 Ọ rụrụ frem ndị ga-adị n’akụkụ ebe ndịda ụlọikwuu ahụ. Ha dị frem iri abụọ ndị chere ihu n’ebe ndịda. 24 O wee jiri ọlaọcha rụọ ntọala iri anọ ndị nwere oghere a ga-akwụnye frem iri abụọ ahụ na ha. Ntọala abụọ nwere oghere ga-adị n’okpuru otu frem, bụ́ ebe ụkwụ ya abụọ ga-abanye, ntọala abụọ nwere oghere adịrịchaa n’okpuru frem ndị ọzọ, bụ́ ebe ụkwụ ha abụọ abụọ ga-abanye.+ 25 Ọ rụkwara frem iri abụọ ndị ga-adị n’akụkụ nke ọzọ nke ụlọikwuu ahụ, n’ebe ugwu, 26 jirikwa ọlaọcha rụọ ntọala iri anọ ha ndị nwere oghere. Ntọala abụọ nwere oghere ga-adị n’okpuru otu frem, ntọala abụọ nwere oghere adịrịchaa n’okpuru frem ndị ọzọ. 27 Ọ rụrụ frem isii ndị ga-adị n’ebe azụ ụlọikwuu ahụ, n’ebe ga-eche ihu n’ebe ọdịda anyanwụ.+ 28 Ọ rụrụ frem abụọ ndị ga-adị n’azụ ụlọikwuu ahụ n’isi ngwụcha ya abụọ. 29 A rụrụ ha ka ha gbaa mkpị si n’ala ruo n’elu, ruo n’ebe ihe nke mbụ dị okirikiri dị. Otú ahụ ka o si rụọ frem ndị ga-adị n’isi ngwụcha abụọ nke ụlọikwuu ahụ. 30 Ha wee dịrị frem asatọ nakwa ntọala iri na isii ha nwere oghere bụ́ ndị e ji ọlaọcha rụọ. Ntọala abụọ nwere oghere ga-adị n’okpuru frem nke ọ bụla. 31 O ji osisi akeshịa rụọ okporo osisi, okporo osisi ise maka frem ndị ga-adị n’otu akụkụ ụlọikwuu ahụ.+ 32 Ọ rụkwara okporo osisi ise maka frem ndị ga-adị n’akụkụ nke ọzọ nke ụlọikwuu ahụ nakwa okporo osisi ise maka frem ndị ga-adị n’akụkụ ebe azụ ụlọikwuu ahụ, n’ebe ọdịda anyanwụ. 33 Ọ rụrụ okporo osisi nke ga-adị n’etiti frem ndị ahụ ka o si n’otu isi ụlọikwuu ahụ ruo n’isi ya nke ọzọ. 34 O ji ọlaedo machie frem ndị ahụ. O jikwa ọlaedo rụọ ihe ndị dị okirikiri ga-ejide okporo osisi ndị ahụ, jirikwa ọlaedo machie okporo osisi ndị ahụ.+ 35 O wee jiri eri na-acha anụnụ anụnụ, ajị anụ na-acha pọpụl, eri na-acha uhie uhie, na ezigbo eri linin a kpara akpa kpaa ákwà mgbochi.+ Ọ kpara ndị cherob na ya.+ 36 O jizi osisi akeshịa rụọrọ ya ogidi anọ ma were ọlaedo machie ha, jirikwa ọlaedo rụọ ihe e ji ekonye ha. O jikwa ọlaọcha rụọ ntọala anọ ndị nwere oghere a ga-akwụnye ogidi ndị ahụ na ha. 37 O wee jiri eri na-acha anụnụ anụnụ, ajị anụ na-acha pọpụl, eri na-acha uhie uhie, ezigbo eri linin a kpara akpa kpaa ákwà ngebichi* ga-adị n’ọnụ ụzọ e si abata n’ụlọikwuu ahụ.+ 38 Ọ rụkwara ogidi ise ya na ihe a ga-eji ekonye ihe na ha. O ji ọlaedo machie elu ha nakwa ihe ndị e ji ejikọ ihe* na ha. Ma, ọ bụ ọla kọpa ka e ji rụọ ntọala ise ha ndị nwere oghere.
^ Na Hibru, “onye ọ bụla obi ya ma ihe.”
^ O nwere ike ịbụ Bezalel.
^ Otu kubit bụ sentimita 44.5 (inch 17.5). Gụọ B14.
^ Ma ọ bụ “ihe ndị dị okirikiri” e ji ejikọta ihe.